AIZA NO ALEHA -
AccueilVaovao SamihafaAIZA NO ALEHA
31/03/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Telozoro – Andrefan’Ambohijanahary
Tarika iray nanana ny lazany teo amin’ny tokontaniben’ny rock malagasy. Hanokatra ny faha-30 taonany ny tarika Green ary hanolotra fampisehoana miavaka anio alina etsy amin’ny Telozoro Andrefanambohijanahary. Fotoana hifankahitana indray amin-dry Jacquot sy ny tariny taorian’ny taona maromaro somary nanginginan’ny tarika. Hiverenana ho kaloina mandritra ny seho indray ireo hira rehetra nahafantarana ny tarika toa ny « Fo roa », « Tapitra hatreo », « Hiverina indray »… Andrasana ihany koa anefa ireo hira vaovao entin’ny tarika hiatrehina ny faha-30 taona.
Piment Café – Behoririka
Taorian’ny seho tany Antsirabe, hiverina eto an-drenivohitra indray ny tarika Kiaka ary manome fotoana ireo mpankafy azy etsy amin’ny Piment Café Behoririka, anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Mandritra io seho takariva io no handrenesana indray ireo hira nahalalana ny tarika raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Fitia nindramina », « Atolotro anao », « Rovako », « Hifandao »… Tsy hohadinoina ao anatin’izany koa anefa ireo rock ao anatin’ny sokajin’ireo mavesatra toa ny « Sabotsy alina », « Soavaly metaly »…
Jao’s Pub – Ambohipo
Mpanakanto tanora roa samy manana ny hanitra ho azy no hiara-dia hanafana ny sehatry ny Jao’s Pub eny Ambohipo anio ao anatin’ilay hetsika « Double ambiance 2017 ». Araka izany, samy hitondra ny gadona mampiavaka azy hafa i Andress sy Sanga Love izay samy ao anatin’ny sokajin’ny mozika mafana. Anisan’ireo nahafantarana an’i Andress ilay hira « Mpanarivo misoma anao » amin’ny gadona dombolo, ary toa izany koa ny « aho ngoma » amin’ny zouk love. Hitondra karazana gadona hafa anefa izy mirahalahy ireto mandritra io fampisehoana io.
Rehefa ela tsy tazana tamin’ny fampisehoana ankalamanjana, hiakatra indray etsy Antsahamanitra ny tarika Samoela ny alahady tolakandro izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Ankoatra ireo ekipa efa mpiaraka aminy hatramin’izay, hiaka-tsehatra etsy Antsahamanitra i Ninah sy Landy, andriambavilanitra hikalo ireo hiran’i Samoela izany feo miavaka izany toa ny « Malala », « Havako mamomamo »… Hiova tsy toa ny mahazatra ihany koa anefa ny fandaharan-kira satria ho maro tamin’ireo hira tsy fiangaliany firy toy ny « Richard le Popman », « Mbola io »… no hiverenan’ny tarika ho kaloina. Na izany aza, ho re ao ihany koa ireo hira tsy azo hialana toa ny ny « Potika sy love », « folaka ihany », « mialangalana »….
Coliséum – Antsonjombe
« Fety ny ao an-tanàna », io indray no lohatenin’ny fampisehoana maimaim-poana atolotr’i Joseph d’Af etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe ny alahady izao tontolo andro. Valopy handrotsahana izay foy no tapakila fidirana. Mialohan’ ny hitondran’i Joseph d’Af ireo hira fiderana toa ny « Tsisy karaha Anao », « Rahoviana », « Novonjenao »… dia hiaka-tsehatra ireo mpanakanto vahiny eo amin’ny sehatry ny hira fiderana toa an-dry TGC, GMMC, Pray’f, Tamma, Hanitra nentin-drazana, Vlm67Ha…
CCEsca – Antanimena
Hahazo laka etsy amin’ny CCesca Antanimena indray ny alahady tolakandro izao ireo kalon’ny fahiny sy ny hiran’ny omaly ao anatin’ilay hetsika « Ny lasako ». Mpanakanto fantatra eo amin’ny kalon’ny fahiny toa an-dry Zozo, Salomon, Lizah Raseta no hamelona indray ireo hiran-dry Ramaroson Wilson sy JJTseheno. Hanotrona sy hanampy azy ireo amin’izany ireo mpanakanto tanora manana feo miavaka toa an’i Lilie sy Gothlieb. Hanakoako etsy amin’ny CCesca araka izany ireo hira nalaza toa ny « Siokan’ny manina », « Ny hirako », « Vetso miampita »…
Jean Eric Rakotoarisoa : Nalany ny saron-tavany
Claudine Razaimamonjy : Nalefa eny amin’ ny PAC ny dosieny